Ny mari-pankasitrahana an'i ComPsych 2021 momba ny fahasalamana @Work dia mankany amin'ny Optimisme an-tserasera
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny mari-pankasitrahana an'i ComPsych 2021 momba ny fahasalamana @Work dia mankany amin'ny Optimisme an-tserasera
Faly ny Internet Optimism amin'ny fanambaràna fa voafidy ho mpandresy loka volamena tsara indrindra ho an'ireo orinasa latsaky ny 100 mpiasa ao amin'ny ComPsych's 2021 Health @Work Award. Amin'izao faha-17 taonany izao, ity loka ity dia manaiky ny orinasa manatsara ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny mpiasa amin'ny alàlan'ny programa vaovao izay misy dikany ho an'ny mpiasan'izy ireo.
“Ity loka ity dia manamafy ny fahavononantsika ho an'ny mpiasa sy ny kolontsain'ny orinasanay. Tsy misy zava-dehibe kokoa noho ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina ao amin'ny ekipanay, "hoy ny talen'ny fitantanana ny New Orleans Sam Olmsted. "Faly aho fa anisan'ny fikambanana tena manome lanja sy mihaino ny mpiasa ao aminy."
Ny Online Optimism dia mizara ny sehatra amin'ireo fikambanana nasionaly sy iraisam-pirenena, ao anatin'izany ny National Basketball Association (NBA), Boston Medical Center, ary ireo orinasa hafa izay miteraka fiatraikany manerantany.
Miaraka amin'ny fanampin'ny Operations Coordinator Sara Bandurian tamin'ny taona 2020, ny Online Optimism dia afaka nametraka programa sy fandraisana andraikitra miompana amin'ny fahasalaman'ny mpiasa. Nanomboka ny klioban'ny mpandeha an-tongotra "Optimovers" izy ireo mba hanentanana ny hetsika bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fifaninanana finamanana ao anatin'ny orinasa. Manana kliobam-boky mivory isam-bolana izy ireo ary manolotra programa fanampiana ny mpiasa ho an'ny torohevitra momba ny fahasalamana ara-tsaina.
Ny komitin'ny kolontsaina anatiny momba ny Optimisme an-tserasera dia manohy mieritreritra fomba vaovao hifaneraseran'ny mpiasa sy hifaneraserany, izay zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay hatramin'ny nanitaran'ny orinasa an'i Atlanta sy Washington DC.
"Ny zavatra tsara indrindra momba ny programa momba ny fahasalamana sy fahasalamana dia ny tenan'izy ireo manokana no namorona azy ireo, noho izany dia namboarina tanteraka tamin'ny kolontsain'ny orinasanay," hoy ny mpandrindra ny Operations Sara Bandurian. “Tianay ny hahazoana antoka fa mahatsiaro tena ho misy vidiny sy hajaina ary ankasitrahana ny olona amin'ny zavatra rehetra ataon'izy ireo.”